Cirro Oo Ka Soo Horjeestay In Doorashada Lagu Xidho Saami Qaybsiga – Heemaal News Network
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro oo maant warbaahintu su’aalo ku waydiisay magaalada Hargaysa, ayaa sheegay in ay haboontahay, in saami qaybsiga laga hadlo kadib marka dagaanada Somaliland ay ka dhacdo Tirakoobid.
Ugu horayn cirro oo wax laga waydiiyey colaada Ceel afwayn ayaa canbaareeyey dagaaladii ka dhacay shalay isaga oo ku baaqayna in si dagdag ah loo joojiyo dagaalka.
Mar wax laga waydiiyey kulanka madaxda Soomaaliya uu la yeeshay Biixi ayuu sheegay in ay tahay ceeb, isagana ay ku caayi jireen xisbiga Kulmiye balse hadda ay cadeeyeen mawqifkooga.
Su’aal laga waydiiyey dib u dhaca doorashada ee ay sheegeen guddiga doorashooyinku ayuu sheegay in go’aanka wakhtiga la qabanayo ay go’aamin doonaan gudiga cusub balse hadda kuwan joogaa ay tahay in ay xilka wareejiyaan, isaga oo ku adkaystay in ay doorashadu dhacdo waqtigii loo balansanaa.
Su’aal kale oo laga waydiiyey sida laga yeelayo caqabada kale ee hor taagan doorashada ee ah saami qaybsiga, ayuu ku jawaabay in ay sax tahay in la saxo saami qaybsiga balse hadda aan wakhtigeedii la joogin, oo ay ahyd in la galo saxitaanka marka ay hawshani dhamaato ( Oo uu uga jeedo sidii Muuse Biixi horay u sheegay doorashada kadib), cirro ayaa hadalka sii raaciyey in ay arintaasi u taalo Muuse Biixi.